Kooxda Dekedda oo laga adkaaday tiro la mid ah kulammadii laga badiyey kal ciyaareedkii hore horyaalka Somali Premier League – Gool FM
Kooxda Dekedda oo laga adkaaday tiro la mid ah kulammadii laga badiyey kal ciyaareedkii hore horyaalka Somali Premier League
(Muqdisho) 10 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa sanadkan la daala dhaceysa guuldarrooyin xanuun badan oo ay ka qaabileyso kooxaha horyaalka Somali Premier League, kaddib markii ay shalay guuldarro kala kulantay naadiga Gaadiidka waxaana loogu awood sheegtay 3-1.
Dekedda waa kooxda saddexdii sano ee la soo dhaafay ku guuleysanaysay horyaalka Somali Preimer League, balse sanadkan waxay la kulmeysaa, isla xisaabtan dhanka iyo kooxaha horyaalka.
Waa guuldarradii labaad ee sanadkan horyaalka ay la kulmeyso kooxda Dekedda, waxaana ka adkaaday kooxaha Mogadishu City Club iyo Gaadiidka, balse marka aad dib u milicsanno xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxay guuldaro la kulantay labo jeer tiiyo ay jirto, haddana inay ku guuleysatay horyaalka.
Kooxaha kala ah Mogadishu City Club iyo Horseed ayaa ah kuwa ku soo xiga kooxda Dekedda, kuwaas oo leh Horseed 21-dhibcood, halka Mogadishu City Club ay leedahay 20-dhibcood, Horseed waxAy isku dhibco yihiin Dekedda waxayna wada leeyihiin min 21-dhibcood.
Horseed iyo Mogadishu City Club ayaa is-arki doona todobaadkan dhexdiisa, waana maalinta Jimcaha haddii ay Horseed soo adkaato hoggaanka horyaalka ayey sii dheereysan doontaa waxayna ku qaban doontaa 3-dhibcood, iyadoo tagi doonta 24-dhibcood, halka Mogadishu CIty hdadii ay ka badiso Horseed ay hogaanka ku qaban doonta 2-dhibcood oo qura iyadoo tagi doonta 23-dhibcood.
Wiilasha Dekedda xilligaan la joogo farqiga goolasha ayaa looga hayaa horyaalka, waxaana ugu haysa kooxda Cawo iyo maalin ee Horseed, maadaama ay Dekedda wax gool aysan lahayn, halka Horseed ay leedhahay 7-gool, balse labada dhinac waa isku dhibco min 21-dhibcood ayey wada leeyihiin.
Kooxda kubadda cagta Gaadiidka guushii ay shalay ka gaartay waxay uga dhigan tahay inay iminka soo gashay kaalinta 6-aad, iyadoo leh 11-dhibcood oo nadiif ah.
Naadiga Dekedda kaliya horyaalka waxaa ugu haray 7-kulan oo nolol ama geeri ah, taasoo ay min kulan ku xisaabtami doonto waa haddii ay rabto inay markii afaraad ku guuleysato horyaalka Somali Premier League.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda Dekedda kulanka soo aaddan waxa ay la dheeli doontaa naadiga Heegan ciyaar dhici doonto 16-03-2020 oo ku beegan maalinta Isniinta ah ee soo aaddan.
Kooxda Arsenal oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro soo xero-gelinta mid ka mid ah daafacyada Man United